Hiiraan Online News About Somalia » Marco Verratti oo bahdilay kooxaha Real Madrid Xaalada madrid oo ka soo ka,…..
Marco Verratti oo bahdilay kooxaha Real Madrid Xaalada madrid oo ka soo ka,…..
Sep 4, 2016 - jawaab
Marco Verratti ayaa dharbaash xoogan ku dhuftay labadda kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid kadib markii uu sheegay kaliya inuu ka fiirsan doono inuu kulaabto horyaalka talyaaniga hadii uu ka tagaayo Paris Saint-Germain mustaqbalka.
Barcelona iyo Real Madrid ayaa labadda waxaa lasheegay inee daneenaayeen xidigaan khadka dhaxe ka ciyaara kaas oo iskaga tagay gurigiisa Pescara kuna biiray Paris 2012-kii, Verratti ayaa kuguuleystay afar jeer horyaalka League 1-ka tan iyo markii uu tagay France.
23-sano jirkaan ayaa shaaca ka qaadan inee wanaagsan tahay Paris iyo inuu qorsheenaayo inuu sii joogo ilaa iyo inta macquulka ah, Laakiin waxa uu si maldahan u sheegay inuu kulaaban doono Italy kahor intuusan meel surin kabaha kubadda cagta.
“Waxaan ahay mid ku fiican Paris, Waxaan ahay mid ku wanaagsan iyo inaan halkaan joogo ilaa inta macquul ah, Hadii maalin aan go’aansado inaa katago PSG, Aniga ma qarinaayo inaa dib ugu laabanaayo Italy, Laakiin hada waxaan u maleeyaa maya,” Varratti ayaa hadalkaasi u sheegay saxaafada.
Verratti ayaa haatan waxaa lagu soo daray xulka Italy ee isreeb reebka Wolrd Cup ka 2018-ka kuwaas oo habeen nimada isniinta la ciyaari doono Israel.